युवती ‘भ’, र्जि’न छ/छैन कसरी थाहा पाउने ? – Ujyaalo Patrika
युवती ‘भ’, र्जि’न छ/छैन कसरी थाहा पाउने ?
साधारणतय: यो’ निच्छे,द न,फा’टेका केटीहरुलाई कु’,मारी अर्थात भ’ र्जिन भनिन्छ । स्त्रीको यो’ नीको मु’खमा टा,सिएर रहेको नरम र पात,लो जा, लो जस्तो हुन्छ । यो जा,लो न,फाटेकोलाई भ’ र्जिन रहेको र फा,टेको पाइमा भ’ र्जिन तो’,डिएको बुझिन्छ ।
जब केटीहरुको पहिलो यौ’ न स’ म्पर्कका बेला यो’ निच्छे,द त,न्किने र च्या’तिन्छ भन्ने गरिन्छ । तर, से’ क्स नभएपनि विभिन्न कारणले यो’ निच्छे,द् च्या,तिन सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार व्यायाम गर्दा, साइकल चलाउँदा, रुख चढ्दा पनि यो’ निच्छे,द च्या,तिन्छ ।
कतिपय मानिसहरु भ’ र्जिन केटीको पहिलो यौ’ नसम्बन्धका बेला र’क्तस्राव हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । र यो नभएपनि दम्पत्तिबीच नै फाटो आउने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर, यो एउटा भ्रममात्रै हो ।
कैयौं अनुसन्धानले पहिलो यौ’ न स,म्पर्कको समयमा र’क्तस्रा, व हुनु वा नहुनुसँग कु’ मारि, त्वको कुनै सम्बन्ध नभएको पुष्टी गरेका छन् । यद्यपी ४२ प्रतिशत महिलालाई भने पहिलो यौ’ न स,म्पर्कको समयमा र’क्तस्रा, व हुन्छ भने बाँकीलाई नहुने चिकित्सकको दाबी छ ।
यसर्थ हालसम्म कुनै पनि केटी भ’ र्जिन रहेको र नरहेको ठोकुवा गर्न सकिँदैन । स्वयम् केटीले आफू भ’ र्जिन रहे नरहेको थाहा पाउन सक्छिन् भने अरुले पत्ता लगाउन कठिन छ ।
Previous यौ८नका कुरामा मान्छेहरु किन धेरै चासो राख्छ ? ‘ यौ८न कल्पना पनि एउता राे,ग ‘
Next युवतीको प्राइभेट पार्टमा झि’ल्ली राख्ने व्यवस्था आएपछि. . .